Gufgaf|Online यमन श्रेष्ठसँग फन्नी गफ
यमन श्रेष्ठसँग फन्नी गफ
गफगाफ - हाँस्य कलाकार यमन श्रेष्ठ यति बेला चलचित्र दाल भात तरकारीमा व्यस्त छन् । लामो समय अमेरिका वसेर नेपाल फर्किएका उनी अहिले कलाकारिता क्षेत्रमा नै सक्रिय छन् । अमेरिका बाट फर्किना साथ उनी नेपली हाँस्य टेलिृश्रंखला ‘खासुखुस’को लेखन तथा अभिनयमा सक्रिय भए । नेपाली हाँस्य टेलिृश्रंखला ‘खासुखुस’ बन्द भएको केहि समय भइसकेको छ । यमन यतिबेला अर्को हाँस्य टेलिृश्रंखला निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । यमनलाई आउँदो हाँस्य टेलिश्रृंखलाको लागि शुभकामना ।
उनै हाँस्य कलाकार यमन श्रेष्ठसँग हामीले फन्नी गफ गरेका छौं ।
बिचरा पृथ्बी नै एकातिरबाट मात्र घुम्छ त्यहि भएर हो । यदि घाम पश्चिमबाट उदाइदिएको भए हाम्रा नेपालका सबै राजनितिज्ञहरु अमेरिका तीर हुन्थे होला । अमेरिकाका राजनितिज्ञहरु चै यता जन्मिन्थे होलान्, अनि त्यो हुँदा हामी पनि अमेरिकन हुन्थ्यौ, छिटै हाम्रो देशको विकास हुन्थ्यो ।
म एक हप्ताका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाँए भने पहिला आफैलाई भइरहेका सामान्य समस्याहरु धुवाँधुलो, साडकका खाल्डा खुल्डी पुर्ने लगायताका कामलाई प्राथमिकता दिन्थे ।
बिहान उठ्दा लिङ्ग परिर्वतन भएर महिलाका रुपमा आफुलाई पाउनु भयो भने ?
म त सेन्टिफ्लाँट नै हुन्थ होला । ऐनामा हेरेर मज्जाले आउऽऽऽऽऽ......भनेर चिच्याउथे होला ।
दिनलाई रात र रातलाई दिन भनिएको भए ?
त्यो त हँुदैन थियो । बिचरा दिनलाई अन्याय भइहाल्थ्यो नि ! कहाँको सुन्दर दिन कहाँको कालो रात ।
तपाइँको नजरमा गायिका ज्योति मगर ?
मेरो नजरमा गायिका सबै एकै त हुन नि । तर उहाँ चै युटुबमा अलि धेरै चर्चा कमाएकी गायिका हुनुहुन्छ ।
छोरा मान्छे किन प्रग्नेन्ट नभएका होलान् ?
बिचरा छोरा मन्छेमा पाठेघर नै हुदैन त कहाँ बाट प्रेग्नेन्ट हुनु र ?
सुहागरातको समय श्रीमति तेस्रो लिङ्गी भएका थाहा पाउनु भएको भए ?
यसमा पनि आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन हुँदा जस्तो रियाक्शन आउथ्यो त्यहि रियाक्शन आउथ्यो होला । अझै गुहार भन्दै चिच्याउँथे होला ।
नायिका स्वस्तिमा खड्काको फेसबुकको पास्वर्ड थाहा पाउनु भयो भने ?
स्वस्तिमा खड्काको फेसबुकको पास्वर्ड थाहा पाएँ भने उम.....यमन इज सो नाइस भनेर अफ्नै तारिफ गरेर स्टाटस हालिदिन्थे ।
जागीरका निम्ति जाँदा त्यस अफिसको हाकीम तपाईको दुस्मन रहेछ भने ?
प्याउलो घस्दै हिहि... नमस्ते गर्दै जान्थे र लाज पचाएरै भए पनि जागिर खान्थे । अब के गर्नु त बाध्यता परे पछि ।